Sheekaddii Xaaji Ibraahim Nuur iyo Maax Dugsiiye ee Awdal. Qalinkii: Jamaal Cali Xuseen. | Hargeysa World~Herald
Sheekaddii Xaaji Ibraahim Nuur iyo Maax Dugsiiye ee Awdal. Qalinkii: Jamaal Cali Xuseen.
Faallo | EditorialSheekaddii Xaaji Ibraahim Nuur iyo Maax Dugsiiye ee Awdal. Qalinkii: Jamaal Cali Xuseen.
Siyaasigii iyo Ganacsadihii weynaa ee Xaaji Ibraahim Nuur Ilaahay haw naxariistee ee ka mid ahaa waftigii gobanimadda ka soo saxeexay Ingiriiska June 1960 kii isaga iyo Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal, Garaad Cali Garaad Jaamac, Axmed Keyse iyo Ina Cabdi Caraale oo xoghayn u ahaa. Wuxuu ka mid ahaa afartii Wasiir ee ugu horeeyey ee wasiiro noqda, wuxuu ka mid noqday Baarlamaankii ugu horeeyey ee lixdankii kolkii waqooyi iyo Koonfur loo midoobay isagoo laga soo doortay Boorama iyo Dilla, wuxuu ka mid noqday xukuumaddii ugu horeysay ee Soomaaliya oo uu wasiir ka noqday. Siyaasadda ka hor iyo ka dib wuxuu ahaa Ganacsade weyn oo maalqabeen ah. Haddaba ninkaasi xilligii Ingiriisku dalka haystay wuxuu raashinka ka iibin jiray goboladda Galbeedka.
Haddaba beri ayaa raashinkii qaaliyoobay oo dadkiina aad uga cawdeen. Ka dib odoyaashii reer Boorama ayaa ku heshiiyey inay isu yimaadaan oo arrinkaasi ay shir kaga tashadaan ganacsadahana si uu qiimaha u dhimo. Haddaba waxaa jiray nin aftahan ahaa oo la odhan jiray Maax Dugsiiye Ilaahay haw naxariistee. Maax Dugsiiye oo ay Xaaji Ibraahim isku fiicnaayeen ayaa arkay isagoo shirkii odoyaasha ku jiray in ay xaajaddu ku foorarto Xaaji Ibraahim Nuur oo ay odayaasha laba nin oo ka mid ahi ku shidayaan oo ay leeyahiin isagaa Bariiskii inagu qaaliyeeyey. Maax Dugsiiye ayaa kolkaa intuu soo booday yidhi; “Waar awalba Xaajigu Bariiska inaguumu qaali garayn jirine miyaa ilowdeen in Ingiriiskii canshuurtii inagu kordhiyey” halkii baa sheekadiiba is badashay oo odayaashii ay Ingiriiskii kula jeesteen. Mar kalena isla ninkaa Maax Dugsiiye ayaa isagoo sita mijin Qaad ah xilligii Ingiriisku qaadka mamnuucay ayaa lagu soo qabtay; kolkii ninkii Ingiriiska ahaa loo keenay buu Ingiriiskii ku yidhi; “Maaxoow inaad sharcigii jebisay miyaanad ogeyn oo Qaadku mamnuuc yahay!!” ismabuu lurine wuxuu Maax Dugsiiye ugu jawaabay; “Ingiriisoow adiguba dhalo Khamri ah ayaad Igland kala timid iyadoo aan dalkayaga laga ogelyn!!” Ninkii Ingiriiska ahaa intuu qoslay buu ku yidhi iska tag. Haddaba maanta iyo sheekadana maxay iska shabahaan. Ma Caydiid Gar Leh, Cali Mahdi Gar leh baynu ku jirnaa! Muxuuse sharcigu dhigayaa? Maalin walba ma sharcigaa lagu murmayaa?